Ny filàna fakantsary volo amin'ny vatana sy ny vokany eo amin'ny polisy sy ny besinimaro | Vahaolana OMG
Ny filàna fakan-tsary mivoaka amin'ny vatana sy ny vokatr'izy ireo amin'ny polisy sy ny vahoaka
Ny fahatokisan'ny polisy eo amin'ny vahoaka
Raha misy ny fifandirana mandritra ny fihaonan'ny polisy, ny polisy dia asaina hanana fihetsika arak'asa amin'ny alàlan'ny manaraka ny protocol omena. Noho ny fiakaran'ny herisetran'ny polisy any amin'ny firenena samihafa, ny tsy fahatokisan-tenan'ny vahoaka momba ny hetsika ataon'ny polisy mandritra ny fifandonana. Na ny fifampiraharahana isan'andro eo amin'ny vondron'ny olom-pirenena sy ny polisy, na eo amin'ny toerana misy azy aza dia niteraka tsy fahatokisana amin'ny ankapobeny. Ohatra, teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2014, maherin'ny 65% ​​ny mpandray anjara (any Amerika) ao amin'ny National Survey of Victimization and Perception on Public Security dia nitatitra fa tsy dia matoky ny polisy monisipaly sy ny transit. Na dia tranga iray mahazatra aza any Amerika io, ireo fisorohana ireo dia tokony hisorohana ny fiakaran'ny fiaraha-monina aziatika toa an'i Singapore. Ilaina ny fampidirana mekanika fanaraha-maso sy ny fandraisana andraikitra amin'ny famahana ny fanararaotan'ny herin'ny polisy ao amin'ny faritra ary hanatsarana ny fahatokisan'ny olom-pirenena, mba hahafahan'ny fampiharana mahomby amin'ny lalàna.
Izany dia rehefa miditra amin'ny sary ilay sary fakan-tsary. Fitaovana tsotra nefa mahomby amin'ny fakan-tsary dia fitaovana izay mandrisika ireo manamboninahitra polisy sy olompirenena hanaraka ny protocol, satria ny fakantsary dia raisina ho tompon'andraikitra izy ireo. Ny fakantsary fakantsary dia mamela ny famerenana indray ny fihaonana, manamora ny famahana ilay olana satria milaza ny fiampangana tsy marina na tatitra, na fanodikodinana. Ny fakan-tsary miakan-doha ihany koa dia fitaovana ho fanamafisana ny rafitry ny polisy amin'ny ankapobeny. Amin'ny alàlan'ny firaketana an-tsoratra dia azo ampiasaina ho an'ny fianarana amin'ny ho avy, amin'ny fahazoana izay atao tsara na izay mety ho tsara kokoa.
Ny fampiasana raki-peo amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mitazona vatana tsy vitan'ny manampahefana mpitandro filaminana no tompon'andraikitra amin'ny laoniny, fa manome fitaovana ilaina azy ireo ihany koa izy ireo hamantatra ny tanjany sy ny fahalemeny. Ny fampiharana azy dia afaka manampy amin'ny fanamboarana ny fitokisan'ny olom-pirenena sy ny fifandraisana eo amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny manampahefana eo an-toerana.
Ny fakan-tsary niakanjo vatana dia nahomby tamim-pahombiazana tany amin'ny firenena maro ho valin'ny olana natokisana, fampitomboana ny kolikoly ary fanararaotam-pahefana eo amin'ny herin'ny polisy. Any Etazonia, ohatra, ny fanadihadiana nataon'ny Forum Executive Investigation Forum (sampana fanadihadiana momba ny Departemantan'ny Fitsarana) dia mampiseho fa ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana dia nanatsara ny fangaraharana sy fandraisana andraikitra amin'ny tranga fitarainan'ny olom-pirenena, ary koa Famantarana sy fanitsiana ny raharaha anatiny. Ankoatra izany, ny fanombanana fiantraikany roa, tany Mesa, Arizona, ary ny iray hafa any Rialto, Kalifornia, dia namarana fa ny fampiharana ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mitazona vatana dia mampihena ny fitarainan'ny olom-pirenena eo amin'ny 75 sy 60 isan-jato.
Amin'ny ankapobeny, ny porofo statistika dia mampiseho fa ny fampiharana ireo fakan-tsary toy izany dia mitondra voka-dratsy: ny fitondran-tena ara-tsosialan'ny olona iray dia mihatsara rehefa tsapany. Amin'izany fomba izany, ny olom-pirenena dia tsy vitan'ny hoe tsaratsara kokoa ny asan'ny mpitandro ny filaminana fa ny mpitandro ny filaminana ihany koa dia mitatitra fifandraisana tsara kokoa amin'ny olom-pirenena aorian'ny fampiharana ny fakan-tsary mitazona vatana.
Na izany aza, diso ny fiheverana lehibe sy lafo ny manafatra ny teknolojia fiarovana mahomby nefa tsy manangana rafitra andrim-panjakana, na koa ny famolavolana fotodrafitrasa tsara amin'ny fampiharana azy. Ho an'ny fakan-tsary mihetsika ho an'ny vatana hamokatra valiny azo refesina sy tsara, ny mpanao lalàna, ny lehiben'ny polisy sy ny olom-pirenena dia tsy maintsy mandinika ireo soso-kevitra sy lesona ianarana avy amin'ny firenena hafa izay nanatontosa programa tahaka izany.
Alohan'ny hametrahana ny fakan-tsary misy vatana, dia tsy maintsy ataontsika ireto fepetra manaraka ireto:
Ny mpiasan'ny polisy dia tokony hofanina amin'ny fitantanana fakan-tsary miorina amin'ny rafi-dalàna sy ny torolàlana nataon'ny polisy.
Rehefa tokony atsangana ny fakantsary. Ohatra, ny fandraketana ny fakan-tsary dia mety ilaina mandritra ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana, fisamborana, fisavana, famotopotorana, ary fanenjehana. Na izany aza, ny olom-pirenena dia manan-jo hahafantatra hoe rahoviana no voarakitra ary afaka mitaky ny zon'izy ireo manokana amin'ny fiainana manokana.
Tokony ho fantatry ny mpitandro filaminana hoe rahoviana sy ahoana ny fanamarinana ny rakitsoratra
Mamorona ekipa teknika izay manana protokol mazava rehefa manaparitaka vaovao, tsy natao hialana amin'ny paikady fiarovana fotsiny fa hiantoka ny fidirana amin'ny fampahalalana azo antoka.
Manitatra ny fahaiza-mitahiry eo an-toerana, na amin'ny alàlan'ny fidirana ivelany amin'ireo mpizara fahatelo na amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa fitehirizana nomerika.
Raiso ny fepetra momba ny fiarovana an-tserasera ary ampiasao ny fomba forensic izay ahafantarana ny marina na ny fanodinana an-tsarimihetsika
Mametraka fitsipi-pitantanana ho an'ny famatsiam-bola sy fandrindrana eo amin'ny manam-pahefana monisipaly, fanjakana sy federaly mba hiantohana ny faharetana ara-bola sy fampandehanana ny firaketana horonantsary.
Rehefa ampiharina miaraka amin'ny fepetra marina, ny fakan-tsary misy vatana dia fitaovana ilaina ho an'ny polisy.
Ny filàna fakan-tsary mivoaka amin'ny vatana sy ny vokatr'izy ireo amin'ny polisy sy ny vahoaka no farany niova: Jolay 27th, 2020 by Admin